(တူရကီ မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
တူရကီနိုင်ငံသည် အာရှတိုက်အနောက်ပိုင်းရှိ အာရှမိုင်းနားကျွန်းဆွယ်တစ်ခုလုံးနှင့် ဥရောပတောင်ပိုင်း အရှေ့ဘက်အစွန်းတို့ ပါဝင်သော သမ္မတနိုင်ငံဖြစ်သည်။ တူရကီနိုင်ငံ၏ အကျယ်ဆုံးနှင့် အရှည်ဆုံးနေရာများမှာ မိုင် ၄၀၀ နှင့် မိုင် ၉၀၀ အသီးသီး ရှိကြ၍ စုစုပေါင်း အကျယ်အဝန်းမှာ ၂၉၆၁၈၅ စတုရန်းမိုင် ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် သန်းခေါင်စာရင်းအရ လူဦးရေမှာ ၇၃ သန်းကျော် ရှိသည်။ တူရကီ နိုင်ငံသားတို့သည် အစ္စလာမ်အယူဝါဒကို သက်ဝင် ယုံကြည်ကြသည်။ အာရှတိုက်ရှိ တူရကီနိုင်ငံနှင့် ဥရောပတိုက်ရှိ တူရကီနိုင်ငံ၏ ပြည်နယ်များကို ဗော့စပရပ်ရေလက်ကြား၊ မာမရာပင်လယ်၊ ဒါးဒနဲရေလက်ကြားတို့က ပိုင်းခြားထားသည်။ ရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာကပင် အရှေ့နှင့်အနောက်တို့ ဖြတ်သန်းသွားလာရာအရပ်ဖြစ်ခဲ့သောကြောင့် နိုင်ငံပင်ငယ်သော်လည်း များစွာအရေးပါခဲ့လေသည်။
Türkiye Cumhuriyeti (တူရကီ)
İstiklal Marşı (တူရကီ)
39°N 35°E﻿ / ﻿39°N 35°E﻿ / 39; 35ကိုဩဒိနိတ်: 39°N 35°E﻿ / ﻿39°N 35°E﻿ / 39; 35
ရီဂျစ် တိုင်ယစ် အာဒိုအန်
• အော့တမန် အင်ပိုင်ယာ
၁၉၁၉ ခုနှစ် မေလ ၁၉ ရက်
၁၉၂၀ ခုနှစ် ဧပြီ ၂၃ ရက်
၁၉၂၃ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၂၄ ရက်
• သမ္မတနိုင်ငံအဖြစ် ကြေငြခြင်း
၁၉၂၃ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၂၉ ရက်
၁၉၈၂ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၉ ရက်
၇၈၃,၃၅၆ km2 (၃၀၂,၄၅၅ sq mi) (အဆင့်: ၃၆)
၂.၀၃ (၂၀၁၅ ခုနှစ် အရ)
• ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက် ခန့်မှန်း
83,614,362 (အဆင့် - ၁၉)
၁၀၉/km2 (၂၈၂.၃/sq mi) (အဆင့် - ၁၀၇)
$၂.၇၄၉ ထရီလီယံ (အဆင့် - ၁၁)
$၃၂,၂၇၈ (အဆင့် - ၄၅)
$၇၉၄.၅၃၀ ဘီလီယံ (အဆင့် - ၂၀)
$၉,၃၂၇ (အဆင့် - ၆၇)
အလယ် · ၅၆
အလွန်မြင့် · ၅၄
တူရကီနိုင်ငံရှိ တောင်တန်းများကား တောရပ်၊ အင်တီတောရပ်၊ အဂ္ဂရီဒက်၊ ပွန်းတပ်ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ အာရှမိုင်းနားအတွင်းဘက်၌မူ တစ်နိုင်ငံလုံး၏ သုံးပုံတစ်ပုံကျော်ခန့်ရှိ၍ ကျယ်ပြန့်သောကုန်းပြင်မြင့်ကြီးရှိသည်။ ထိုကုန်းပြင်မြင့်သည် ပင်လယ်ပြင်မှ ပေ၂၅၀၀ မှ ၆၀၀၀ အထိ မြင့်သည်။ တူရကီနိုင်ငံ၌ ထင်ရှားသော မြစ်ကြီးတို့မှာ ဥရောပတိုက်ဖက်တွင်မားရစ်ဆာမြစ်၊ မင်ဒယ်ရက်မြစ်နှင့် ဆာကားရယားမြစ်တို့ ဖြစ်ကြသည်။ ရာသီဥတုမှာ ကမ်းရိုးတန်းဒေသများ၌ စွတ်စိုထိုင်းမှိုင်း၍ ကုန်းတွင်းပိုင်း၌မူ ခြောက်သွေ့သည်။ ကုန်းတွင်းပိုင်းဒေသ၌ ဆောင်းရာသီတွင် အရှေ့မြောက်လေအေးတိုက်ခတ်သောကြောင့် ခိုက်ခိုက်တုန်အေး၍ နွေရာသီ၌ အလွန်ပူပြင်းသည်သာမက သဲမုန်တိုင်း များလည်း ကျရောက်လေ့ရှိသည်။ တောင်တန်းများဝိုင်းရံနေသဖြင့် ကုန်းတွင်းပိုင်း၌ နှစ်စဉ်ရွာသွန်းသော ဆောင်းရာသီ မိုးရေချိန်မှာ ၁၀ လက်မပင် မပြည့်ချေ။ ကမ်းရိုးတန်းတလျှောက်တွင် မိုးကောင်းသော်လည်း မြောက်ဘက် ကမ်းရိုးတန်း၌သာလျှင် မိုးအသည်းထန်ဆုံးရွာသည်။ အီးဂျီးယန်းပင်လယ်ဖက်ရှိ အစ်ဇမာမြို့ (ရှေးအခေါ် ဆမားနားမြို့) အနီးတဝိုက်ဒေသမှာ နွေရာသီတွင် ပူနွေး၍ ဆောင်းရာသီတွင် တော်ရုံသာအေးသဖြင့် တူရကီနိုင်ငံတွင် ရာသီဥတု အသာယာဆုံးအရပ် ဖြစ်ပေသည်။ ရှေးတူရကီနိုင်ငံ၏ ရှစ်ပုံတစ်ပုံသည် ထင်းရှူးပင်၊ ဝက်သစ်ချပင်၊ ဗောက်ပင်၊ သစ်အယ်ပင် စသည့်အပင်များပါဝင်သော သစ်တောများဖြင့် ဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိသည်။ တစ်နိုင်ငံလုံးလူဦးရေ၏ ၆၅ ရာခိုင်နှုန်းသည် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းနှင့် ကျွဲနွားမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများဖြင့် အသက်မွေးကြသော်လည်း နိုင်ငံ၏မြေယာ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းကိုသာ စိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်ကြသည်။ ကျန်သောမြေသည်ကား မြေရိုင်းဘဝ၌သာ ရှိသေးသည်။ ရှေးအခါက လယ်မြေများကို လူတစ်ဦးတည်းက အများအပြားပိုင်ဆိုင်လေ့ရှိခဲ့သော်လည်း ၁၉၄၅ ခုနှစ် လယ်မြေပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဥပဒေအရ လယ်မြေများကို ကိုယ်တိုင်လယ်လုပ်သူများလက်သို့ ခွဲဝေပေးလိုက်လေသည်။
တူရကီနိုင်ငံသည် တွင်းထွက်ပစ္စည်းများစွာ ကြွယ်ဝသော နိုင်ငံဖြစ်သည်။ ရွှေ၊ငွေ၊ကြေးနီ၊ ကျောက်မီးသွေး၊ ခဲ၊သွပ်၊ ပြဒါး၊ ကျောက်မီးသွေးနု စသောပစ္စည်း အများအပြားထွက်၏။ ရေနံကို အရှေ့တောင်ပိုင်းဒေသမှာ ရရှိနိုင်သော်လည်း ရေနံထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းမှာ များစွာမဖွံ့ဖြိုးလှသေးချေ။ စက်မှုလက်မှုလုပ်ဆောင်ရာ မြို့များတွင် အဝတ်အထည်နှင့် သံထည်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်သော စက်ရုံကြီးများရှိ၏။ တူရကီနိုင်ငံ၏ ထင်ရှားသော ထွက်ကုန်တစ်ရပ်ကား ကော်ဇောများပင် ဖြစ်သည်။ အန်ကာရာမြို့သည် တူရကီနိုင်ငံ၏ မြို့တော်ဖြစ်၍ လူဦးရေအများဆုံးဖြစ်သော အစ်စတန်ဘူလ်မြို့ (ရှေးအခေါ် ကွန်စတန်တီနိုပယ်) သည်ကား တူရကီနိုင်ငံ၏ အကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်သည်။ တူရကီလူမျိုးများ၏ မူလဒေသမှာ မွန်ဂိုလီးယားပြည်ဖြစ်၍ ၆ ရာစုနှစ်တွင် တာကီစတန်ပြည်သို့ ထိုမှတဆင့် ရောက်လာကြပြီးလျှင် ၇ ရာစုတွင် အစ္စလာမ်အယူဝါဒကို သက်ဝင်ယုံကြည် ကိုးကွယ်ခဲ့ကြလေသည်။ တူရကီနိုင်ငံတည်ရှိရာ အာရှမိုင်းနားအရပ်သို့ပထမဦးစွာရောက်လာသော တူရကီများမှာ ဆဲလ်ချွတ်က်တူရကီလူမျိုးများဖြစ်၏။ ယင်းတို့သည် ၁၀၅၅ ခုနှစ်တွင် အာရှမိုင်းနား၌ နိုင်ငံတည်ထောင်ကြလေသည်။ မွန်ဂိုလူမျိုးများ၏ တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် အာရှတိုက်အလယ်ပိုင်းမှ ဆုတ်ခွာခဲ့ရသော အော်တိုမန်တူရကီလူမျိုးများသည် ဆဲလ်ချွတ်က်တူရကီလူမျိုးများထံတွင် အမှုထမ်းခဲ့ပြီးနောက် ၁၂၉၉ ခုနှစ်၌ ယင်းတို့၏ခေါင်းဆောင် ပထမအော့စမန်ဘုရင်သည် နိုင်ငံသီးခြားတည်ထောင်၍ အာရှမိုင်းနားတစ်ခုလုံးကို သိမ်းပိုက်ပြီးသော် ဥရောပတိုက်တွင်းသို့ နယ်ချဲ့ခဲ့လေသည်။ ၁၃၅၅ ခုနှစ်တွင် ဂလစ်ပိုလီကိုလည်းကောင်း၊ ၁၄၅၃ ခုနှစ်တွင် ကွန်စတန်တီနိုပယ်မြို့ကိုလည်းကောင်း၊၁၄၈၀ ပြည့်နှစ်တွင် ဘော်လကန်နိုင်ငံငယ်များကိုလည်းကောင်း၊ ၁၅၅၀ ပြည့်နှစ်တွင် အီဂျစ်၊ ဆီရီးယား၊အာရေဗျ၊ မက်ဆိုပိုတေးမီးယား၊ ထရစ်ပိုလီနှင့် ဟန်ဂေရီစသော နိုင်ငံများကိုလည်းကောင်း၊ ၁၅၇၁ ခုနှစ်တွင် ဆိုက်ပရပ်ကျွန်းနှင့် ၁၆၆၉ ခုနှစ်တွင် ဂရိကျွန်းတို့ကိုလည်းကောင်း ဆက်လက်သိမ်းပိုက်လိုက်ခြင်းဖြင့် ဥရောပနှင့် အာဖရိကတိုက်များအထိ ကျယ်ပြန့်သော အော်တိုမန်တူရကီနိုင်ငံတော်ကြီး ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့လေ၏။ စတုတ္ထမဟာမက်ဘုရင် (၁၆၄၃-၁၆၈၃) လက်ထက် ၁၆၈၃ ခုနှစ်၌ ဥရောပတိုက်ရှိ ဗီယင်နာမြို့ကို လုပ်ကြံရာ၌ အရေးနိမ့်ခဲ့သည်မှစ၍ တူရကီတို့၏ အော်တိုမန်နိုင်ငံတော်ကြီး တဖြည်းဖြည်းပျက်စီးခဲ့ရလေသည်။ ၁၆၉၉ ခုနှစ်တွင် ဟန်ဂေရီနိုင်ငံကို စွန့်လွှတ်လိုက်ရပြီးနောက် ၁၇၆၈-၁၇၇၄ နှင့် ၁၇၈၂-၁၇၉၂ ခုနှစ်များအတွင်း ရုရှနှင့် ဖြစ်ပွားသော စစ်ပွဲနှစ်ရပ်စလုံးတို့၌ အရေးနိမ့်ခဲ့သဖြင့် ၁၇၈၃ ခုနှစ်တွင် ကရိုင်းမီးယားနယ်ကို ရုရှသို့ ပေးလိုက်ရလေသည်။ ဂရိနိုင်ငံသည် ၁၈၂၁ ခုမှ ၁၈၂၉ ခုနှစ်အထိ တူရကီတို့ အုပ်စိုးမှုကို အောင်မြင်စွာ တော်လှန်နိုင်ခဲ့သဖြင့် လွတ်လပ်ရေးပေးလိုက်ရပြန်သည်။ ၁၈၀၄ ခုနှစ်တွင် ဆားဗီးယားနိုင်ငံ ပုန်ကန်ထကြွမှုမှစ၍ ဂရိကဲ့သို့သော တူရကီပိုင် ဘော်လကန်နိုင်ငံများ မငြိမ်မသက်ဖြစ်လျက်ရှိသည်ကို အခွင့်ကောင်းယူပြီးလျှင် ရုရှတို့က တူရကီဖက်သို့ နယ်ချဲ့လာပြန်သောကြောင့် ကရိုင်းမီးယားစစ်ပွဲ (၁၈၅၃-၁၈၅၆) ဖြစ်ပွားခဲ့၏။ ဤစစ်ပွဲတွင် အင်္ဂလိပ်နှင့် ပြင်သစ်တို့က တူရကီဖက်မှ ဝင်ရောက် တိုက်ခိုက်ကြသဖြင့် ရုရှနိုင်ခဲ့သော်လည်း ၁၈၇၆ ခုနှစ်၌ ဘူလဂေရီးယားနိုင်ငံ ထကြွမှုကို အကြောင်းပြု၍ ရုရှနှင့် တူရကီတို့ ထပ်မံစစ်ဖြစ်ကြပြန်သည်တွင် တူရကီက အရေးနိမ့်သဖြင့် ၁၈၇၈ ခုနှစ် ဘာလင်စာချုပ်အရ ဗော်လကန်နိုင်ငံငယ်များ ဖြစ်သော ဘူလဂေရီးယား၊ ဆားဗီးယား၊ ရူမေးနီးယား၊ဘော့စနီးယား၊ ဟာဇီဂိုးဗီးယား စသော နိုင်ငံငယ်များကို တူရကီက လွတ်လပ်ရေး ပေးလိုက်ရလေသည်။ ၁၉၀၈ ခုနှစ်တွင် စည်းမျဉ်းခံ အုပ်ချုပ်ရေးမျိုးပေးအပ်ရန် ပြုပြင်ရေးသမားများဖြစ်သော တူရကီ လူငယ်အဖွဲ့က တောင်းဆိုရရှိခဲ့လေသည်။ ၁၉၁၂-၁၃ ခုနှစ်အတွင်း ဗော်လကန်နိုင်ငံများသည် တူရကီတို့ကို အယ်လဗေးရီးယားနှင့် မက်ဆီဒိုးနီးယားတိုင်းပြည်များမှ မောင်းထုတ်လိုက်ပြန်သော်ကြောင့် တူရကီပိုင် ဥရောပနယ်မြေဟူ၍ အရှေ့တောင်ဘက်များ၌ အနည်းငယ်မျှသာ ကျန်ရှိလေသည်။
ပထမကမ္ဘာစစ် (၁၉၁၄-၁၉၁၈) အတွင်းက တူရကီနိုင်ငံသည် စစ်ရှုံးသည့်ဂျာမနီတို့ဖက်မှ ပါဝင်ခဲ့သဖြင့် စစ်ပြီးသောအခါ ဆီးရီးယား၊ အာရေဗျနှင့် မက်ဆိုပိုတေးမီးယားနိုင်ငံများကို လက်လွှတ်လိုက်ရပြီးလျှင် အီဂျစ်နိုင်ငံအပေါ်ရှိ မိမိဩဇာကိုလည်း ရုပ်သိမ်းလိုက်ရလေသည်။ ၁၉၁၉ ခုနှစ်တွင် တူရကီနိုင်ငံ ဆမားနားမြို့ (ယခုအခေါ် အစ်ဇမာမြို့) ကို ဂရိတို့က ဝင်ရောက် တိုက်ခိုက်ကြသဖြင့်လည်းကောင်း၊ တူရကီနိုင်ငံကို ဖြိုခွဲလိုက်သော ဆဲဗရားစာချုပ်ကို တူရကီဘုရင့်ကိုယ်စားလှယ်များက လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြသဖြင့်လည်းကောင်း၊ မကျေမနပ်ဖြစ်ကုန်သော တူရကီလူမျိုးတို့သည် ၁၉၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် အန်ကာရာမြို့၌ မျိုးချစ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီး မွတ်စတာဖာကယ်မားလ်အစိုးရအဖွဲ့က အုပ်ချုပ်၍ ကွန်စတန်တီနိုပယ်မြို့အနီးတဝိုက်ကိုသာလျှင် စူလတန်ဘုရင်က အုပ်ချုပ်ခဲ့ရလေသည်။ ၁၉၂၂ ခုနှစ်သို့ ရောက်သောအခါ တူရကီနိုင်ငံသည် စူလတန်ဘုရင်၏ အုပ်ချုပ်မှုကို ဖျက်သိမ်း၍ သမတနိုင်ငံထူထောင်လိုက်လေသည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ တူရကီနိုင်ငံသည် အဘက်ဘက်၌ လျင်မြန်စွာ ပြောင်းလဲ တိုးတက်ခဲ့ပေသည်။ ရှေးဆန်သော စနစ်တို့ကိုပယ်၍ အနောက်နိုင်ငံတရားဥပဒေနှင့် ဒီမိုကရေစီဝါဒတို့ကို ကျင့်သုံးလာပြီးလျှင် စက်မှုလုပ်ငန်းများကို တည်ထောင်ခဲ့လေသည်။
ဒုတိယကမ္ဘာစစ် (၁၉၃၉-၄၅) ဖြစ်ပွားစဉ်က တူရကီနိုင်ငံသည် ကြားနေခဲ့သည်ဟု ဆိုသော်လည်း ၁၉၄၄ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၂ ရက်နေ့တွင် ဂျာမနီနိုင်ငံနှင့်လည်းကောင်း ၁၉၄၅ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၃ ရက်နေ့တွင် ဂျပန်နိုင်ငံနှင့်လည်းကောင်း အဆက်အသွယ်များ ဖြတ်လိုက်ပြီးလျှင် ၁၉၄၅ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၃ ရက်နေ့တွင် ထိုနိုင်ငံတို့ကို စစ်ကျေညာခဲ့လေသည်။ စစ်ပြီးခေတ်၌ ဒါးဒနယ်ရေလက်ကြား ကို တူရကီနှင့် ရုရှတို့ ပူးပေါင်းထိန်းသိမ်းရန်ဟူသော ရုရှအဆိုကို တူရကီက လက်မခံသဖြင့် ရုရှက တူရကီနှင့် အဆက်ဖြတ်လိုက်လေ၏။
၁၉၄၅ ခုနှစ် မတ်လ ၁၉ ရက် ‌နေ့တွင် ဆိုဗီယက်ရုရှအစိုးရတို့က ထိုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၇ ရက်‌နေ့မှအစပြု၍ ၁၉၂၅ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁၇ ရက်‌နေ့၌ ၁၀ နှစ်သက်တမ်းထားရှိကာ တူရကီနိုင်ငံနှင့် ချုပ်ဆိုခဲ့ပြီးလျှင် ထို‌နောက်၌ ၁၉၄၅ ခုနှစ်အထိ သက်တမ်းတိုးလိုက်‌သော ကြား‌နေ‌ရေး၊ မကျူး‌ကျော်‌ရေးနှင့် နိုင်ငံအချင်းချင်း ပူး‌ပေါင်း‌ဆောင် ရွက်‌ရေး စာချုပ်ကိုပယ်ဖျက်‌ကြောင်း ‌ကျေညာခဲ့‌လေသည်။
၁၉၆၁ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၉ ရက်‌နေ့တွင် ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အ‌ခြေခံဥပ‌ဒေသစ်တစ်ရပ်ကို လူထုဆန္ဒ‌ပေး ပွဲဖြင့်အတည်ပြုခဲ့ ၏။ ထိုအ‌ခြေခံဥပ‌ဒေအရ အုပ်ချုပ်‌ရေးအာဏာသည် နိုင်ငံ‌တော် သမ္မတတွင် တည်ရှိသည်။ ဥပ‌ဒေပြု‌ရေးအာဏာသည် အမျိုး သားလွှတ်‌တော်ကြီးတွင် တည်ရှိ၍ တရားစီရင်‌ရေးအာဏာသည် သီးခြား လွတ်လပ်‌သော တရားရုံးများတွင် တည်ရှိ‌လေသည်။ အမျိုးသားလွှတ်‌တော်ကြီးတွင် အဖွဲ့ဝင် ၁၈၄ ဦးပါဝင်‌သော ဆီးနိတ်လွှတ်‌တော်နှင့် အဖွဲ့ဝင်ဦး‌ရေ ၄၅၀ ပါဝင်‌သော အမျိုး သားလွှတ်‌တော်တို့ပါဝင်၏။ နိုင်ငံ‌တော်သမ္မတကို ထိုလွှတ်‌တော် နှစ်ရပ်၏ ပူးတွဲအစည်းအ‌ဝေးမှ ‌ရွေး‌ကောက်တင်‌မြှောက်ရ၏။ သမ္မတ၏သက်တမ်း မှာ ၇ နှစ်ဖြစ်၍ ‌နောက်တစ်ကြိမ် ထပ်မံ အ‌ရွေးခံခွင့် မရှိ‌ပေ။
↑ "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası" (in Tr)၊ Grand National Assembly of Turkey။ ""3. Madde: Devletin Bütünlüğü, Resmi Dili, Bayrağı, Milli Marşı ve Başkenti: Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Milli marşı "İstiklal Marşı" dır. Başkenti Ankara'dır.""
↑ "Mevzuat: Anayasa" (in Tr)၊ Ankara: Constitutional Court of Turkey။
↑ Turkish Constiution | Anayasa Mahkemesi။
↑ ၆.၀ ၆.၁ The Results of Address Based Population Registration System, 2020။ Turkish Statistical Institute (31 December 2020)။
↑ ၇.၀ ၇.၁ ၇.၂ ၇.၃ World Economic Outlook Database, April 2021။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=တူရကီနိုင်ငံ&oldid=708204" မှ ရယူရန်
၁၄ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၀:၂၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၁၄ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၀:၂၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။